ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 1:13 AM
အခုတော့လေ. . .ပြင်ပြောချင်တယ်။
အမယ်အိုတို့ကတော့ ဒီခံစားမှုတွေနဲ့ အရွယ်ကို ကျော်လာခဲ့ပြီ။
xxxကမ္ဘာ ကမ္ဘာ အဝေးxxxအဝေးဆုံးပြေးတော့xxx
အဝေးဆုံး အဝေးဆုံးသို့ သွားကွယ်xxx
သံသရာတစ်ပတ်ပြည့်ရင်တော့ ပြန်ဆုံကောင်းပါရဲ့ ...
အနည်းဆုံးတော့ “တာ့တာ” လို့ ပြောသွား
တော်သေးတာပေါ့။ ကျေနပ်စရာပါ။ :)
တာ့တာ တဲ့လား အဲလိုဆို ဘိုင်ဘိုင်လို့ပြန်အော်လိုက်ဗျာာ ရှုပ်တယ် ခံစားမနေနဲ့ ကျွန်တော်ပါ ကြားထဲက လိုက်ခံစားရတယ်း)
ကိုတူးရေ....အားမလျှော့နဲ့သိလား....ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆက်လျှောက်ရင်း သံသရာတစ်ပတ်ဆုံးရင်တော့ကောင်မလေးနဲ့ ပြန်ဆုံချင်ဆုံနိုင်ဦးမှာပါ....(ဆံဖြူသွားကျိုးလောက်တဲ့အချိန်တွေလောက်ရောက်ရင်ပေါ့....) :D
ဒါပေမဲ့ ချစ်သူအတွက်ဆုတောင်းလေးတော့ သဘောကျမိတယ်။ အင်း ဘာကြောင့်များ ဒီလိုအချစ်စစ်တွေနဲ့ချစ်တဲ့သူကိုမှ ကံကဒီလိုစီမံတာလည်းမသိပါဖူး။ ကံတရားရယ် ညအတွက် သံသရာတစ်ပတ်မှာ ပြန်ဆုံရင်လည်း ကောင်းသောဆုံခြင်း စိတ်ချမ်းမြေ့တဲ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ပါစေ....
နှုတ်မဆက်ဘဲ ဘဝတခုလုံး ထုတ်ယူခံခဲ့ရဖူးတယ်။
လို့သာခေါ်ခဲ့တော့မယ်နော်.. ဘာတွေ ပြောချင်လဲဆိုတာ သိမှာပေါ့.. :D
သံသရာ တစ်ပတ်ဆုံးလို့ ပြန်ဆုံခဲ့သွားရင် ပိုဝေးသွားမယ်ဆိုတာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချိန် အဲဒီစကားလုံး၂လုံးကြောင့် တစ်နေ့မှာ ပြန်တွေ့ရင် ခင်ဗျား ရင်တောင် ခုန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပဲ။ ကျွန်တော် အတိုင်းပဲ ခင်ဗျားလဲ အဲဒါကို လက်ခံမှာပါ။
ချစ်သူရေ. . .
မင်း . . .သင်းကွပ်လို့ ရမတဲ့လား။
မင့်ကမ္ဘာ နဲ့ ငါ့ကမ္ဘာကြားမှာ
မင်း . . .သင်းကွပ်မယ်ဆို . . .
ခင်မင်စွာဖြင့် . . .
ကိုမိုးဝေ ကဗျာက ပိုမိုက်တယ်ဗျာ .. ထိတယ် ...